श्रेणी स्थिति - बोलीको एक विशेष भाग
राज्य को लागि रूसी भाषा अध्ययन शब्दहरू स्कूल पाठ्यक्रम। विद्यार्थी अक्सर तिनीहरूले मतभेद छ हुनत, विशेषण र विशेषण तिनीहरूलाई भ्रममा।
श्रेणी - यी शब्दहरू morphological सुविधाहरू तिनीहरूलाई बोलियों रूपमा वर्गीकरण गर्न अनुमति जो छन्, किनभने तिनीहरूले प्रश्नहरूको जवाफ "के?" र "कसरी?" र भावना वा चेतन वस्तुहरु वा शारीरिक inanimate वस्तुहरु र आफ्नो वातावरण वा स्थान सम्बन्धित प्रक्रियाहरू को मूड वर्णन गर्न अभिप्रेरित छन्। उदाहरणका लागि: घर बेचैन थियो।
तर यति लामो आवेकहिन predicatives वा predicates पहिले - जो राज्य को एक श्रेणी को शब्दहरू हुन् अर्को नाम, - केही भाषाविद् सन्दर्भमा आउन छन् स्वतन्त्र बोली भाग। तर वैज्ञानिकहरू बीचमा यो स्वामित्वको लागि मापदण्ड को मुद्दा मा कुनै एकता छ। शब्द, आफ्नो घटक, व्याकरण वर्दी। कहिलेकाहीं यो विशेषण छोटो प्रकारका बुझाउँछ, पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिएको छैन। उदाहरणका लागि: आवश्यक छ, हुनुपर्छ, खुसी, आदि
श्रेणी अवस्था अक्सर मुख्य सदस्य मा आवेकहिन वाक्य हो र एक स्वतन्त्र स्थिति कब्जा गर्ने शब्दहरू व्यक्त। तिनीहरूले एक स्थिर अवस्था प्रतिनिधित्व र homonyms छन्, त्यसैले तिनीहरू विशेषण र विशेषण छोटो प्रकारका देखि भेद गर्न कठिन छन्। उदाहरणका लागि:
1 चुपचाप हृदय (हालत श्रेणी) मा उहाँले;
2. चुपचाप र सजिलै बगिरहेको स्ट्रिम (adverb);
3. पशु चुपचाप (छोटो विशेषण)।
अवस्था श्रेणी निम्न विशिष्ट सुविधाहरू छ: पहिलो, जीवित एकाइ को मूड वा भावना कल, र वातावरण वर्णन गर्दछ। दोस्रो, यो अक्सर विषय कुनै संग आवेकहिन वाक्यमा नाम predicate भाग हो। उदाहरणका लागि:
1 को छाया मा सुन्दर र ओसिलो छ।
(राज्य वातावरण: सुन्दर, नम, प्रकाश, गर्मी, आदि)
2. उहाँले चोट
(जीवित जगतले को शारीरिक sensations: देख्न, यो दुख्छ सुन्न, cramped र stuffy, आदि)
3. आह! कस्तो आनन्द!
(भावनात्मक अमेरिका मानव: खुसीसाथ अपमानजनक, डरलाग्दो र कष्टप्रद माफ गर्नुहोस्, आदि)
4 पाप यसलाई हेर्न छैन!
(सर्वसाधारण विभाग: पाप, तपाईं गर्न सक्दैन, गर्न सक्छन्, आदि)
5 प्रारम्भिक अप प्राप्त गर्नुहोस्।
(स्थानिक र अस्थायी विशेषताहरु: लेट, प्रारम्भिक, टाढा नजिक, उच्च)।
स्थिति श्रेणी (तल उदाहरण हेर्नुहोस्) चेतन वस्तुहरु वर्णन भने, आफ्नो नाम समय जनाउने ब्याकरणिक शब्द को फारम व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। भने, तर, - वातावरण, त्यसपछि यसको नाम अक्सर prepositional को रूप मा प्रस्तुत गरिएको छ। उदाहरणका लागि:
1 एक खराब (एक - पी, व्यक्ति को नाम)।
2. पार्क छायादार र सुन्दर मा गर्मी मा (पार्क मा - पारस, वस्तु को वातावरण को नाम)।
हामी स्थायी र गैर-morphological सुविधाहरू छ predicate। वर्ग खडा आफ्नो immutability छ। एक fickle - एक तुलना डिग्री देखि गठन थिए ती शब्दहरू गुणस्तरीय विशेषण। उदाहरणका लागि:
को न्यानो को दक्षिण पक्षमा।
शब्दहरू Syntactic भूमिका mononuclear आवेकहिन वाक्य मा राज्य predicate को कोटीमा सीमित छ।
1 गाह्रो छ तापनि, तर अगाडि जान!
कसरी शान्त 2. जताततै छ!
predicates शब्दहरू संग अक्सर प्रयोग गरिन्छ र "कुनै", "बन्न" र "हुनेछ" "हुनेछ", "हुनेछ" र "छ", आदि उदाहरणका लागि:
1 तर यो शान्त थियो।
2. त्यहाँ पनि हल्ला हो।
ठीक राज्य श्रेणी मा एक lexical एकाइ को पहिचान निर्धारण गर्न, विद्यार्थी को अभ्यास गर्दै, नियमहरूमा थाहा र अभ्यास गर्न राम्रो हुनुपर्छ। एकै समयमा, क्रममा यो एक क्रियाविशेषण र विशेषण संक्षिप्त संग भ्रममा, तपाईंले योजना मा शब्द बनाउन आवश्यक morphological विश्लेषण को, को वाक्य मा syntactic भूमिका निर्दिष्ट।
मा रूसी polnoglasie के हो?
रूसी शैंली आधारभूत सिद्धान्तहरू
स्वाट: सबै ज्ञात गुप्त
को कर्मचारी जिम्मेवारी वित्तीय कामदारहरूको: प्रकार, सीमा। को क्षति लागि जिम्मेवार को कामदार को नियोक्ता कारण
एक वेबसाइट को लागत कितनी छ?
कसरी राउन्ड अनुहार शरमाना लागू गर्न
भौतिक मा कमजोर अन्तरक्रिया के हो?
"Neomycin": प्रयोग, वर्णन, समीक्षा, मूल्य लागि निर्देशन
सेन्ट पीटर्सबर्ग इतिहास छोटकरीमा। को सेन्ट-पीटर्सबर्ग को इतिहास
प्याकेज प्रयोग गरेर आफ्नो भावना व्यक्त: उपहार आफ्नो हात लपेटन
कसरी सही मटर बाँध गर्न? मटर हेरचाह
बच्चालाई को हरियो कुर्सी। Norma वा चासो लागि कारण?